ILinus Torvalds ibukeka yehlukile ngemuva kwe-CoC, kepha manje isibuyile ... | Kusuka kuLinux
Sonke simangele ngemuva kokumenyezelwa kwe- U-Linus Torvalds uthi uyahoxa ekuthuthukiseni i-Linux kernel ukuthola usizo okwesikhashana. Konke lokhu kwaholela umphakathi wonjiniyela oyinhloko ukuthi wamukele indlela yokuziphatha entsha, noma i-CoC, enesethi yemithetho yokuthi ungayenza kanjani i-LKML. ULinus wabona ukuthi udinga usizo yingakho washiya umyalo wokuthuthuka isikhashana ukuze amsize abone ukuthi yini angayicasula ngolimi lwakhe ...
Kepha ezinye izinto zenza iLinus ihlanye kakhulu, njengekhodi elibi noma ukungasebenzi kahle okuthile. Futhi kubonakala sengathi ngaphandle kwe-CoC, ILinus Torvalds isibuyile kumagama ayo ayingozi Muva nje. ILinus icabanga ukuthi ikwazi kakhulu lokhu ekushoyo nokwenzayo njengamanje, futhi izama kanzima ukungabi namawala, kepha kwesinye isikhathi iba nomthelela omkhulu ezinqumweni ezithile noma ezenzweni zabanye onjiniyela ezimenza agxume.
UsenguLinus ngemuva kokuthatha umhlalaphansi, ngiqonde ukuthi ngeke silindele ukuthi umuntu azoshintsha ubusuku obubodwa noma ngenxa yalo lonke usizo emhlabeni. Ngalesi sizathu, yize enesilinganiso esilinganiselwe kakhulu, usabakhumbula abanye abantu abafana nalaba abaphikisana nabo manje UDave Chinner, omunye wabahleli abagcina uhlelo lwefayela le-XFS. Lo hlelo wase-Australia ubhekene nale FS eyenziwe yiSilicon Graphics (SGI).
«Shit dave'Ingabe ukuphawula kukaTorvalds kusuka ku-LKML kuya kuDave. Inkinga ukuthi, uDave ukholelwa ukuthi kuzodingeka i-cache eningi yamakhasi ukuxhasa isitoreji esine-disk esisha ngokufika kwe-PCIe 4.0, futhi lokho kuzoba nomthelela omubi ekusebenzeni. Njengoba ama-SSD eshesha, igebe phakathi kwejubane le-I / O eliqondile kanye nokulondolozwa kwesikhashana liyabonakala, futhi ngokugxumela kwi-PCI-gen elandelayo lizobonakala kakhulu. Kepha kumaTorvals kubonakala kuyimpikiswano engenangqondo ...
Yonke ingxoxo lapha
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » ILinus Torvalds ibukeka yehlukile ngemuva kwe-CoC, kepha manje isibuyile ...
I-BULLSHIT, i-bull shit, ngokoqobo yize ingenanhlonipho kakhulu, akusona isiphawulo esingafanele.
Incazelo yalo i-polysemic, futhi kulo mongo kusho ukuthi izimpikiswano zayo ZINGAMANGA, futhi akukho okunye. Kungakho futhi ebabiza ngokuthi yi-GARBAGE. I- "FALLACIOUS argument" kungaba inkulumo ehloniphekile, kodwa angikaze ngiyifunde noma ngiyizwe ngesiNgisi esivamile, noma encwadini yaseyunivesithi, noma kunoma iyiphi ifilimu, kufanele ingasetshenziswa kakhulu.